काठमाडौंसहित ४७६ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १३ हजार नाघ्यो, कहाँ कति नयाँ संक्रमित ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ४७६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । सोमबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ४७६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए । जसमध्ये ३६४ पुरुष र ११२ जना महिला रहेका छन् ।
उनकाअनुसार नयाँ संक्रमित हुनेहरुमा मोरङका १, सप्तरीका १५, धनुषाका ६, मोहत्तरीका ४, पर्साका १, बाग्लुङका १४, अर्घाखाँचीका ३८, भक्तपुरका १, धनकुटाका १, गोरखाका ५, गुल्मीका २०, खोटाङका १, पाल्पाका २३, पर्वतका १३, प्युठानका ९, रौतहटका १८, रोल्पाका १, रुपन्देहीका ५, स्याङ्जाका ८, तनहुँका ९, धादिङका १, काठमाडौंका ६, चितवनका ४, कैलालीका ३०, बाराका ३, मकवानपुरका १, काभ्रेका १, ललितपुरका १, बाजुराका ९८, कपिलवस्तुका २, डोल्पाका २, कालिकोटका २, दाङका ५८, रुकुम पश्चिमको १ र डोटीका ६९ जना रहेका छन् ।